Fitsarana Saodiana: “Afaka Manao Izay Tiany Atao ny Mpanapaka” · Global Voices teny Malagasy
Fitsarana Saodiana: “Afaka Manao Izay Tiany Atao ny Mpanapaka”
Voadika ny 12 Novambra 2012 1:57 GMT
Androany vao maraina no notontosaina ny fotoam-pitsarana fahadimy mikasika ny raharaha mahavoarohirohy ireo mpiaro ny zon'olombelona Mohammad Al-Qahtani sy Abdullah Al-Hamid. Nisisika ny mpitsara tamin'ny fotoam-pitsarana farany teo fa tsy azon'ny olona atrehina ny fotoana, saingy nolàvin'izy roa lahy mpikatroka ankitsirano izany. Niova hevitra araka izany ny mpitsara ka azon'ny daholobe atrehina indray ny fotoam-pitsarana saingy tsy maintsy ajanona ao ivelany ny finday. Olona teo amin'ny 45 teo no nanatrika ny fotoam-pitsarana mba hanohana an'ireo mpikatroka roa lahy, zatovo lahy avokoa ny ankamaroan'ireo tonga. Fanampin'izany, sambany tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana ireo mpanao gazety nasionaly ao an-toerana. Ary, araka ny efa fantatra, polisy sivy no mitsangana isaky ny sisin'ny efitranom-pitsarana.
Raha nanomboka ny fotoana, nomena alalana ny mpitsara mpampanoa hamaky ny lisitra lava be anaty pejy 18 misy ny fiampangana azy roa lahy. Nilaza ireo mpikatroka roa lahy fa tsy ara-drariny ny famelàna ny mpampanoa lalàna hamaky irery izany tahaka ny efa-natao tamin'ny fotoam-pitsarana teo aloha, ary tsy mba nisy akory fangatahana azy roa lahy hanambara ny fiarovan-tenany. Nilaza izy ireo fa tokony natao izany mba hisarihana ireo mpanao gazety.
Dr Al-Qahtani (eo ankavia) sy Dr Al-Hamid (eo ankavanana) via SultanAlfifi
Arak'izany, nanontany an'ny Dr Al-Hamid ny mpitsara raha mihevitra izy fa ara-dalàna ny fihetsiketsehana manoro-hevitra ny mpitondra fanjakana na mamita ny fanovana. Nanamafy Dr Al-Hamid fa ara-dalàna izany ary nanazava fa manan-jo hitsipaka ny tsy rariny ny vahoaka, tahaka ny fihazonana tsy amin'antony ireo olona maherin'ny 30.000. Nangataka an'ny Dr Al-Hamid sy Dr Al-Qahtani ny mpitsara mba hanaporofo fa olona maherin'ny 30.000 no notànana tsy amin'antony, ary namaly izy ireo fa vonona hanaporofo izany raha toa ka sokafan'ny minisiteran'ny Atitany ny fonjany rehetra.
Tao amin'ny Twitter, nizara ny sombiny tamin'ny resadresaka nandritra ny fotoam-pitsarana ireo izay nanatrika izany :
@thumarm: Tao amin'ny fitsarana ACPRA … Al-Qahtani: Ara-dalàna ve ny managadra [olona] tsy nisy didim-pitsarana nivoaka? Mpitsara: Afaka manao izay mety aminy ny mpanapaka.
@alabdulkarim0: Dr Al-Qahtani: Tsy afaka mametraka lalàna manameloka fihetsiketsehana ny firenena satria efa nanao sonia fifanekena iraisam-pirenena fa hiaro ny fahalalaham-pitenenana, ary anisan'izany ny [zo] hanao fihetsiketsehana.
@Alqudaimi: Nanontany an'i Abdullah Al-Hamid ny mpitsara: Mihevitra ve ianao fa tokony hajaina sy hankatòavina ny baikon'ny mpanapaka? Hoy i Al-Hamid namaly: Eny, satria ny vahoaka no tena mpanapaka [ara-dalàna]
Nilaza ny mpitsara fa azo tsaraina avokoa ny olona tsirairay ao Arabia Saodita, anisan'izany ny zanaka lahin'ny mpanjaka Abdulaziz, ny mpamorona ny fanja-tokana tsy refesi-mandidy. Nanambara ireo mpikatroka fa ny minisiteran'ny Atitany no tena fahavalo, izay tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any am-ponja ary manindry ny mpitsara mba hitondra azy ireo eny amin'ny fitsarana. Tsy namaly ny mpitsara.
Dr Al-Hamid (fahatelo eo amin'ny ankavia) sy Dr Al-Qahtani (ankavia) taorian'ny fotoam-pitsarana. via @thumarm
Nanapa-kevitra ny mpitsara fa afaka roa herinandro, amin'ny 24 Novambra indray no hotontosaina ny fotoam-pitsarana manaraka.